अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा नियुक्त, ४ बजे शपथ
काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडा आज पुनः अर्थमन्‍त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे पदावधी सकिएपछि मंगलबार उनले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अस्पतालमा भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए।
राजीनामा दिएसँगै स्वीकृत गरेर दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैले सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यभार तोकेकी थिइन्। खतिवडालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो मृगौला पूनः प्रत्यारोपण सुरु गुर्न अगाडि नै बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकेको स्रोतको भनाइ छ।
उनी गैह सांसदका रुपमा आज मन्त्री बन्न लागेका हुन्। संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम खतिवडा गैह्र सांसदका रुपमा मन्त्री बन्न लागेका हुन्। त्यसका लागि आज दिउँसो ४ बजे राष्टपति भवन शित्तल निवासमा उनको शपथको तयारी सुरु भएको छ।
उनी गैह्र सांसदबाट मन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति बन्नेछन्। ६ महिनाभित्र उनी संघीय संसद अन्तरगतको प्रतिनिधीसभा तथा राष्ट्रिय सभामध्ये कुनै एकमा सांसद नबने उनको पद स्वतः समाप्त हुने छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार उनलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो।
वहालवाला मन्त्रीको सांसदको पदावधी सकिए उनको पुन: नियुक्ति गर्नुपर्ने र शपथ गराउनु पर्ने कानूनविद्को तर्कपछि खतिवडाले मंगलबार राजीनामा बुझाएका थिए।
देशलाई पुनः अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास हुँदैछः प्रधानमन्त्री
कर्णाली विवाद : ओली–प्रचण्डबिच कुरा मिलेन
सार्वजनिक सवारी साधनमा ठगिँदै यात्रु